Koollo Anerobic, Koolo Dhisme, Aqua Silicone Sealant - Huitian
Markii ugu horreysay warshadaha
Sannadkii 1997, waxaa dib loogu qaabeeyey shirkad wadaag ah oo la yiraahdo Hubei Huitian Glue Co., Ltd. Waxay ahayd tii ugu horreysay ee lagu qoro isla isla warshadda sanadkii 2010, iyadoo leh lambarka saamiyada ee 300041.Waxaa jira afar saldhig oo warshadeed oo ku yaal Shanghai, Guangzhou, Changzhou, iyo Xiangyang, oo dhererkoodu gaarayo 1,300 hektar, celcelis ahaan dakhli sanadle ah oo gaaraya 2+ bilyan, oo u adeegaya 8 warshadood oo waaweyn oo gawaarida ah, tareen xawaare sare leh, warshado, elektaroonik, isgaarsiinta, sawir qaadista, baakadaha, iyo dhismaha. Hogaamiyaha warshadaha leh qiyaasta ugu weyn iyo dakhliga ugu badan ee Shiinaha.
Ku guuleystey 7 ugu horeysay
Soo saaraha ugu weyn adduunka ee qalabka isgaarsiinta-Huawei; Shirkadda ugu weyn adduunka ee soo saarta qalabka tareenka-CRRC; Shirkadda soo saarta basaska adduunka ugu weyn-Yutong Bus; Soosaaraha ugu weyn adduunka ee soo saaraha sawir-qaadista-JinkoSolar; Soo-saaraha nalka koowaad ee Nalalka nalka LED-Philips; Buundada koowaad ee adduunka-Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge-sea Bridge; Madaarka adduunka ugu weyn-Beijing Daxing Airport;
40 Sano oo waayo aragnimo ah
Huitian, waxay kuxirantahay marna ruuxi ma aqbasho, waxay la kulantay qalalaasaha iyo xaaladaha adag, ayadoo loo marayo dhibatooyinka, wey sii weynaanayaan oo sii xoogeysanayaan. Huitian wuxuu ku koray shirkad hormuud u ah warshadaha wax lagu dhejiyo ee Shiinaha.
Qaybta suuqa ee warshadaha sawir-qaadista ayaa ah tan ugu horreysa adduunka. Mid ka mid ah seddexdii diiba mid baa leh sheyga huitian-ka oo la mariyay.
Qaybta suuqa ee LED waa tan ugu horreysa, waxaanan iskaashi la leenahay tobanka macaamiil ee ugu sarreeya. NO.1 saamiga suuqa La shaqeynta Dhamaan 10ka macmiil.
Waxaa jira 37% saamiga suuqa ee warshadaha baabuurta ganacsiga ee alaabada Huitian.Waxaan nahay alaab-qeybiyeyaasha Yutong, Jinlong, Jinlv, Zhongtong, Haige, Futian, iwm
Huitian waxay siisay taageero R&D waxayna siisay mashruuc isku-xidhka qaab dhismeedka iyo xiritaanka qaabdhismeedka buundada iyada oo 120 sano la hubinayo tayada.
HUITIAN waxay siisaa guud ahaan qalabka gacanta lagu hago lacag saaid ah oo xawli ku socota iyo xalka qashinka lagu beddelo.
380km / h CRH xawaaraha tareenka tareenka ee alaab-qeybiye istiraatiiji ah, Huitian wuxuu dhaafay 800,000 KM imtixaan adag
Huitian waxay iskaashi la sameysay Jinko dhinacyo kala duwan oo gebi ahaanba iibin ah Jinko in ka badan 100 milyan sanadka 2018 in ka badan boqolkiiba 45%.
Huitian horeyba waxay u aheyd alaab-qeybiyaha ugu horeeya ee loo yaqaan 'YUTONG BUS', muraayadda muraayadda, qaybaha qufulka & isku xidhka xalka guud. waxaan leenahay in kabadan 70% saamiga muraayadda baska ee YUTONG.
Huitian horeyba waxay u lahaayeen 15 sano taariikh warshadaha xabagta elektarooniga ah ， helitaanka SGS, UL iwm.
HT906Z waa aaladda 'PV module RTV sealant' oo si gaar ah loogu adeegsado xirmooyinka qaybaha 'PV modules', isku dhejinta sanduuqa isku xidhka iyo isku xidhka tareenka.
728 waa xarkaha xabagta PU-ga ee loo adeegsado dahaarka qalabka filimka ee waxqabadka sare leh, oo si ballaaran loogu isticmaalay balaastig / caag balaastik ah iyo caag / filim metlay ah. Badeecadani waxay leedahay astaamaha adhesion-ka bilowga weyn, xoogga diirka sare iyo hufnaanta wanaagsan, taas oo si wax ku ool ah uga hortagi karta dhibaatada tunnelka.
728 wuxuu leeyahay isku-buuq hooseeya iyo dabacsanaan wanaagsan ka dib markuu bogsaday, taas oo ku habboon daahan xawaare sare leh. Waxaa loo oggol yahay in lagu kordhiyo xoog saarista shaqada xaaladaha gaarka ah. Dhaqaalaha iyo ku celcelinta ayaa waliba ah astaamaha.
Weeton 823A / 828B Laba-qaybood oo PU ah oo dabacsan oo dabacsan ...
8921 waxqabadka sare ee polyurethane sealant waa hal qayb, Tilmaame sare, ma qulquli, xabag yar oo polyurethane ah. Shayga waa u nuglaansho hooseeya, thixotropy wanaagsan, taas oo ku habboon iskuminta gacanta. Koolada la daaweeyay waa elastomers, anti-qabow iyo isbedel kulul, iska caabin wanaagsan oo ku saabsan waxqabadka isbedelka culeyska. Waa la rinjiyeyn karaa, la nadiifin karaa, daxalna ma lahan, kor u qaadka iyo dhismaha sare ma qulqulayo. Waxaa jira isku dheelitirnaan ballaaran oo loo yaqaan 'substrates'.
5299 Laba Qeyb Silikoon oo si gaar ah loogu isticmaalo tuubada korantada iyo qeybaha elektarooniga ah. Gaar ahaan tuubada gudaha iyo banaanka soo bandhigyada LED-ka. Heerkulka qolka ama daaweynta kuleylka. Waxqabadka sare ee kuleylka, cadeynta qoyaanka, iska caabinta gariirka, iska caabinta kiimikada.
9331 RTV koolada waxqabadka sare waa hal qayb. Waxaa loo adeegsadaa dhammaan noocyada isku xidhka wershadaha nalalka-dhamaadka sare, xiritaanka, isku xidhka qaybaha elektarooniga ah, xoojinta, qalabka korantada qalabka dahaarka, daboolida iyo ka-hortagga baxsiga, qoyaan-caddeynta, shoogga, qaboojiyeyaasha iyo shaandhada xoojinta qalabka qaboojinta.
9967 Shahaadada silikoon caddeynta cimilada
9967 waa hal-qayb, daaweyn dhexdhexaad ah oo silikoon ah oo leh iska caabin cimilo fiican. Waxaa si gaar ah loogu talagalay shaashadda u adkaysata cimilada dhammaan noocyada darbiyada daahyada (darbiyada daahyada muraayadda, darbiyada daahyada aluminium), iyadoo siinaysa darbiyada daahyada dammaanad waxqabad ammaan ah, lagu kalsoonaan karo oo waara.
9667 Laba Qeyb Dhismeedka Silikoon Khatimidii ...
9335 Ujeeddo Badan oo Dhexdhexaad Silikoon Khatimidii
9335 waa ujeedo badan oo caalami ah oo silikoon dhisme ah oo si gaar ah loogu isticmaalo albaabada, Windows iyo gudaha iyo dibedda isku shaabaynta. Waxay leedahay dhejis wanaagsan albaabbada kala duwan, Windows iyo dhismayaasha hoose, sidoo kale waxay ku habboon tahay shaabad guud, oo ay ku jiraan lebbiska dhalada ah, shubka, birta, aluminium, iwm.
AB xabagta, isticmaalka guud, gawaarida iyo gawaarida dayactirka, doorashada dhaqaalaha badankood, mugga sare ee la dhoofiyo
New Partner AB Glue wuxuu ku bogsaday heerkulka qolka si dhakhso ah wuxuuna si toos ah ugu xirnaan karaa dusha waxoogaa saliid leh, hagaajinta qaybaha haanta saliida daadanaya, taangiyada, tuubooyin, flanges, transformer, kuleylka kuleylka iyo qalab kale. Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa birta, dhoobada, balaastigga, alwaax iyo dheg dheg isku dhegan oo iswadaag ah.
Ma helin wixii aad raadineysay?
Warshadaha Gawaarida Ganacsiga